Posted by Hassan Galaydh Si kooban marka weyddiinta kore looga jawaabo, waxqabadka xukuumadda waxa leh cidda waxqabad la’aanta leh. Sida aanay caqligal u ahayn in eedihii iyo guuldarrooyinkii xukuumadda Kulmiye oo dhan loogu nisbeeyo Xirsi Cali X. Xasan ayaanay caqligal u ahayn inuu waxqabadkii iyo guulihii xukuumadda Kulmiye keligii ku faano, kana xigsado xukuumadda Kulmiye. Haddii se taasi maangal noqoto, waxa iyana maangal ah in dhammaan gefafkii Kulmiye geystay muddadii uu talada hayay loo nisbeeyo isla Xirsi Cali Xasan. Haddii taasi dhacdo, waxa furan in ummaddu la xisaabtanto. Waxa kale oo beenoobaya isbeddalkii uu Waddani ku baaqayay inuu dalka ka hirgalinayo mar haddii kuwii ka masuulka ahaa wax kasta oo Kulmiye lagu eedeeyaa ay maanta calansidayaal ka yihiin isbeddalka Waddani.